Is Diiwaan Gellinta Dib ha loo Furo | allsanaag
Is Diiwaan Gellinta Dib ha loo Furo
Wafdi ka socda Beesha Caalamka ayaa booqday magaalada Kismaayo si ay xaalada doorashada ay u soo indha indheeyaan. Wafdigan ayaa ka codsaday maamulka Jubaland in ay dib u furaan is diiwaan gellinta musharixiinta si kuwa aan is diiwaan gellin ay isku diiwaan gashaan, balse arrintaa ah in dib loo furo is diiwaan gellinta ayaa waxaa go’aan ka gaarideeda iska leh guddiga doorashada madaxa bannaan ee Jubaland.
Dalka Soomaaliya waxaa ka jira jahwareer siyaasadeed oo ay abuureen Farmaajo iyo Kheeyre kuwaas oo heshiis ku ah in nidaamka federaalka uusan ka hirgellin dalka Soomaaliya, lana burburiyo maamulada ka jirta dalka si dalka mar kalle looga xukumo magaalada Muqdisho oo kaliya, qofkii jaamacad, dhaqtar, baasaboor, iyo wax kasta uu u baahdana uu u yimaada magaalada Muqdisho. Hadaba, dadka oo ka reeystay arrimahaas marna suurtagal ma noqoneeyso ineey yeelaan in tallada dalka ay ku soo ururto hal koox iyo hal magaalo.
← Arday Jaamacada Maakhir ka Qalinjibisay Qof aan xishoonayn waa kan oo kale →